Muxuu yahay CODSIGA loo diray maamulka Biden ee la xiriira dadka Soomaalida? - Caasimada Online
Home Dunida Muxuu yahay CODSIGA loo diray maamulka Biden ee la xiriira dadka Soomaalida?
Muxuu yahay CODSIGA loo diray maamulka Biden ee la xiriira dadka Soomaalida?
Washington (Caasimada Online) – Afar xubnood oo ka tirsan Congress-ka Mareykanka ayaa maamulka madaxweyne Joe Biden u diray codsi ku saabsan in dib loo soo cusbooneysiiyo sharcigga badbaadinta ku-meel gaarka ah ee loo yaqaan TPS ee dadka Soomaalida aan sharciga ku laheyn Mareykanka.
“Tani waa xaalad nolol iyo geeri u ah dad badan oo degan degmadeyda iyo dhammaan Mareykanka,” ayey Ilhaan ku tiri qoraal ay u dirtay wargeyska Sahan Journal.
“Xaaladda Soomaaliya aad ayey uga fog tahay amni, islamarkaana dad badan oo haysta sharciga TPS waxay ku nool yihiin cabsi iyo walaac, ayaga oo aan ogeyn inay dalka sii joogi doonaan iyo in kale.”
“Baabi’inta TPS waxay cawaaqib burbur leh ku yeelan doontaa carruur Mareykan ah oo ay dhaleen Soomaalida haysata sharciga, sababtoo ah waalidiinta waxay wajihi doonaan kala doorasho aan macquul aheyn oo ah inay caruurtooda ka tagaan ama u kaxeeyaan dal halis ah,” ayey ku yiraahdeen warqadda.